शाहरुख खान मन पर्दैनथ्यो यश चोपडालाई, जसले पछि सुपरस्टार बनाए
बलिउडमा यश चोपडालाई रोमान्स किङ नै मानिन्छ । उनले बलिउडमा इततेफाक, दाग, लमहे, चाँदनी, दिल तो पागल हैजस्ता ब्लकबस्टर फिल्म दिएका छन् ।
चारपटकसम्म फिल्मफेयरको बेस्ट डाइरेक्टर अवार्डले सम्मानित यश चोपडा र शाहरुख खानको जोडी लामो समयसम्म बलिउडमा छाइरह्यो । मानिसहरू भन्छन् यश चोपडा बलिउडमा हुँदैन थिए त साहरुख खान आज यति ठूलो स्टार बन्ने नै थिएनन् । शाहरुखले चोपडाका निर्देशनमा डर, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया लेजाएंगे, रब ने बनादी जोडी, जब तक है जानजस्ता फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
तर, कुनै समय यश चोपडा र उनका छोरा आदित्य चोपडा शाहरुखलाई रुचाउँदैन थिए । यश चोपडाले जब शाहरुखलाई आफ्नो फिल्म डरमा साइन गराइरहेका थिए, तबसम्म पनि उनी शाहरुखलाई मन पराउँदैनथे ।
चोपडाले खानको फिल्म किङ अंकलको केही फुटेज देखेका थिए, जुन उनलाई मन परेन । तर, शाहरुखलाई फिल्ममा साइन गराउनु उनको बाध्यता थियो । किनकि, शाहरुख बाहेक अरू कोही एक्टर उक्त फिल्ममा नेगेटिभ रोल गर्नका लागि राजी भएनन् ।
पछि यशले शाहरुखको काम देखे अनि उनी निकै प्रभावित भए । चोपडाले आफ्नो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा रिटायर्ड भएको घोषणा गरेका थिए । रिटायर्ड भएको घोषणापछि उनी एक महिना पनि परिवारसँग बस्न सकेनन् ।
जब तक है जानबाट उनी निर्देशनमा फर्किएका थिए । चोपडाले अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार उनका दाजु बिआर चोपडासँग साधना फिल्ममा काम गर्दा उनको भेट वैजयन्ती मालासँग भयो । वैजयन्ती मालाले चोपडालाई निर्देशनको क्षेत्रमा काम गर्न सल्लाह दिइन् ।
दाजुले उनलाई फिल्ममा काम गर्ने मौका दिए । त्यसपछि नयाँ दौर र साधना फिल्ममा पनि काम गर्ने मौका पाए । त्यतिवेला चोपडाले भनेका थिए, भगवान्ले महिलालाई सुन्दर बनाएका छन् । म तमाम महिलाहरूलाई इज्जत गर्छु । मेरो नजरले महिलालाई नराम्रो देख्दैन । म आफ्नो काम मात्र गरिरहेको छु । भगवान्को कृतिलाई थप सुन्दर बनाउने प्रयास गरिरहेको छु ।
सन् २०१२ अक्टोबर २१ मा चोपडाको निधन भयो । उनले आफ्नो अन्तिम फिल्म जब तक है जानको रिलिज हेर्न पाएनन् । दीपावलीमा रिलिज हुने भनिएको सो फिल्म चोपडालाई निकै मन परेको उनले आफ्नो अन्तिम अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।
फरक धार | साउन ३२, २०७६
नखानुहोस् एस्पिरिन, निम्तन्छन् समस्या
एजेन्सी | भदौ १, २०७६
गलत तरिकाले नुहाइरहनु भएकाे त छैन ? नसा फुट्ला है !
पूर्वराजदूत झा हत्या प्रकरणः सुरक्षागार्ड फेरि पक्राउ
माधवभन्दा झलनाथ वरिष्ठ
शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्नू– सर्वोच्च
विहेस्थलमा विस्फोटपछि बेहुला भन्छन्– मैले जीवनबाट आशा नै गुमाएँ
रवि लामिछानेले भने– पुडासैनीको भिडियो हेरेको छैन
प्रधानमन्त्री ओली र आफूबीचको सहमति कार्यान्वयन हुने प्रचण्डकाे अपेक्षा